स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिने जमराको जुस बुटवलमा उत्पादन - nayakhoj24.com
स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिने जमराको जुस बुटवलमा उत्पादन
प्रकाशित मिती: October 6, 2018 | nayakhoj24 admin पढ्न:0मिनेट
बटौली १८ असोज । दशै पर्व नजिकिदै छ । निधारमा रातो टिका र कानमा जमरा सिउरीएर मान्यजनको आशिस थाप्ने दशै पर्वको विशेषता हो । दशैमा लगाईने जमराको अरुबेला त्यति उपयोगितामा ल्याएको पाईदैन् । सरायँ मेलामा जमराको माला बनाउनु बाहेक जमराको उपयोगिता देखिँदैन । यसको जुस बन्छ, तर धेरैलाई थाहा छैन । स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिने भएपछि बुटवलमा यसको जुस उत्पादन थालिएको छ ।
बुटवलको लक्ष्मीनगरमा रहेको गुल्मी मुसिकोट जैविक कृषि फार्म उत्पादन तथा वितरण केन्द्रले एक बर्ष देखि जमराको जुस बनाएर विक्रि गर्दै आएको छ । दुई लाखको लगानीमा सुरु भएको फार्ममा जमराको जुस पिउन अहिले दैनिक १ सय ५० जना आउने गर्दछ । मासिक १ लाख रुपैया सम्म आम्दानी गर्दै आएका फार्म सञ्चालक डिलाराम वाशिष्ट (उपाध्याय) जमराको जुस प्रति आर्कषण बढ्दै गएको डिलाराम बाशिष्ट उपाध्याय बताउँछन् ।
लक्ष्मी आर्दश सामुदायिक बन उपभोत्ता समुहको डेढ कठ्ठामा अहिले व्यवसायीक रुपमा जमरा लगाएका छन् । जापानिज प्रविधि फार्ममा अपनाइएको छ । जमुराको जुस प्रति गिलास ३० तथा अंकुरित जुस ४० रुपैयामा विक्रि गर्दै आइरहेका छन् । विहान मनिङ वाक्कमा निसक्ने अधिकांशले जमराको जुस खाने गर्दछन् । जमराको जुस नियमित सेवन गर्दा हाड, जोर्नी दुख्ने समस्याको समधान भएको मनिङ वाक्क गर्ने पद्मा पक्षाईको भनाई छ ।जुम्लाको जौ र गौ बाट बनाईने जुसमा भिटामिन, खनिज, आइरन, क्याल्सियम तत्व पाईन्छ । स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुने भएकाले दिनहुँ जमराको जुस सेवन गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । जमरामा जुसमा अर्गानिक र सोडियाम हुने भएकोले जल वियोजनको समस्या भएकाहरुलाई निकै फाइदा गर्छ । अमेरिकाको विज्ञान प्रविधि स्रोत अनुसन्धान संस्थाले गरेको अनुसन्धान अनुसार भिटामिन, खनिज, क्लोरोफिलको हुन्छ । यसमा गाईको दूधमा भन्दा ३० गुना बढी भिटामिन बि, तथा पालुङ्गोको भन्दा ३ दशमलव ३ गुना भिटामिन पाइन्छ । त्यस्तै ६ दशमलव ५ गुनावेसी क्यारोटिन, ५ गुना बढी आइरन पाईने प्रमाणित भएको छ ।
जमरा भन्ने वित्तिकै धेरैले संम्झिन्छन्, लगाउने कुरा । तर, दशैमा टीकासँग लगाउने जमरा लगाउँन मात्रै होइन् खान पनि हुन्छ, त्यो पनि स्वास्थ्यको दृष्टिले धेरै फाइदाजनक पनि हुने तथ्य पुष्टि भएको छ ।
जमरामा जुसमा पाउने पौष्टिक तत्व हुने तर, तीतो नुहुँने भएकोले प्रयोग जुसको रूपमा सकिन्छ । यसमा अर्गा्निक र सोडियाम हुने भएकोले जलवियोजनको समस्या भएकाहरुलाई निकै फाइदा गर्छ । प्रत्येक एक ग्राम जौका जमरामा ७७५ मिलिग्राम अर्गा्निक सोडियम हुन्छ । यसले रक्त प्रवाहमा हुने क्याल्सियामलाई रगतसँग घुलिएर वग्न मद्दत गर्छ । शरीरका जोर्नीहरुमा जम्मा हुने क्याल्सियामपन घोलिन मद्दत गरी नसाहरु सन्तुलित राख्छ ।
मेडिकल अध्ययनका लागि बंगलादेश जाने विद्यार्थी समस्यामा
केटा-केटीहरुमा टाउको दुख्ने समस्याबाट कसरी बच्ने ? शेयर गर्नुहोस
घमौरा आएर तनाबमा हुनुन्छ ? यसरी गर्नुहोस् घरमै उपचार
फर्सीको मुन्टा खाँदा स्वास्थ्यमा हुने फाइदाहरु ! जानी राखौं
नाकबाट रगत आउने समस्या छ ? बच्न यसो गर्नुहोस